August 3, 2012 — nepalitaly
”आज” अर्थात् गाइजात्रा
by Dinesh Bala on Friday,3August 2012 at 01:15 ·
आजको दिन हास्ने दिन हसाउने दिन, रम्ने दिन रमाउने दिन.” आज” लाई बिशेष रुपले खुला व्यंग्य प्रहार गर्ने दिन भनेर चिनिन्छ. सबै जना रम्न रमाउन र खुसिमा हराउन चाहन्छन. हासी रहेका हुन्छन र हसाइ रहेका हुन्छन. म आजको दिनलाई बिर्सन पुग्छु आज. ”आज” छ मेरो मनमा मेरो मस्तिस्कमा आजको दिन म पनि अरु जस्तै खुसि हुदै रमिता हेर्न कुनै डबलीको भिडमा लाछाद पछाद गर्दै तमाशा हेरिरहेको हुन्थे. कहिले हसाउनेखालको कहिले व्यंगात्मक, कहिले रमिला त कहिले मन छुने खालका प्रस्तुति लिएर समूहहरु एक पछि अर्को गर्दै लस्कर लगेर आफ्नो कला प्रस्तुत गर्थे. केहि थाहा थिएन किन यस्तो र के गरेको. खाली रमाइलो लग्थियो प्राय जो पनि यो महोत्सब लाई हेरेर रमाई रहेका हुन्थे.
आज मलाई ”आज” को अर्थ थाहा भएको छ. मलाई आज न हास्न मन छ. न त मेरो मनले कुनै रमाइलो तमासा खोजेको छ. न आखाले केहि हेर्न चाहन्छ. आज म आफ्नो समय उहाको सम्झनामा बिताउन चाहन्छु. ”आज” को महत्व र उद्देस्य सबैले बुझिदियोस भन्ने चाहन्छु. आज को दिन सम्ममा दिबंगत हुनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुको र ”आमाको” आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु. ( ”आज” अर्थात् गाइजात्रा).
Posted in आफ्नै कुराहरु... LeaveaComment »
« आज गाइजात्रा पर्व मनाईंदै
अमेरिका तस्करी हुँदै गरेका नेपाली कोस्टारिकामा समातिए »